रामेछापमा युवाको सक्रियता : समुदाय स्तरमा फैलिएको कोभिड-१९ लाई परास्त गर्न के के गर्दैछन् ? - Likhu Online
१५ जेष्ठ २०७८, शनिबार १७:४३ प्रकाशित
विश्वभर फैलिरहेको महामारी कोभिड—१९ (कोरोना भाइरस) का कारण देशभर निषेधाज्ञाको अबस्था छ । कोरोनाका देशभर तिब्ररुपमा फैलियसँगै मर्नेको संख्यापनि तिब्ररुपमा बढिरहेको छ । हस्पिटलमा बेड, अक्सिजन, औषधि, खोप, डाक्टर, नर्स, औषधि अभाावै अभाव भएको अबस्था छ । यतिबेला सरकारको मात्रै मुख ताकेर बस्ने स्थिती छैन । जो जहाँ छ जुन हैसियतमा छ त्यहिबाट एकले अर्कोलाई सहयोग गर्नु पर्ने अवस्था छ । ५ बर्षका लागि दुइ तिहाइको सरकार जनताले चुनेर पठाएको भएपनि महामरीकै विचमा प्रधानमन्त्रि फेरबदममै लागिपरिरहेका अबस्थामा राजनितिक दलका केहि युवा पुस्ताहरु भने महामारीलाई चुनौती दिन फिल्डमा उत्रियका छन् । यसै मध्यका रामेछापका युवा तथा समाजसेवी के कसरी परिचालन भैरहेका छन् भन्ने विषयमा रा.प्र.पा का रामेछाप जिल्ला कार्यसमितीका प्रथम उपाध्यक्ष दशराम सुनुवार सँग हाम्रा लिखु अनलाईन सहकर्मी राजेश सिह बराइलीले गरेको कुराकानी संपादित अंसमा प्रस्तुत छ ।
१. तपाई अहिले केमा ब्यास्त हुनुहुन्छ ?
सर्व प्रथमत कोरोना महामारीका विचमा हामी सम्पुणर् नेपाली मात्र नभएर विश्वभरिनै भयावह छ । त्यसैले यो कोरोनाबाट बच्न बचाउन सरकारबाट बैसाख १६ गतेबाट लागु भएको निषेधाज्ञाको पालना गर्दै तथा आपत विपतमा परेका साथीभाइ तथा जनताहरुको आफुले सकेजति सेवा तथा सहयोग गर्दै छु ।
२.कोरोना कहरका विचमा तपाईको पार्टिले कस्तो भुमिका खेलिरहेकोछ ?
बास्तबमा यो कोरोनाको आकार सानो छैन । विशाल छ अन्तराट्रिय स्तरमानै फैलिएको छ । नेपालको परिस्थितिमा भन्नु पर्दा मानविय संकटको बेला नेपाल सरकारले त्यति भुमिका निर्बाह गर्न सकेको छैन । बुद्धिमत्ता र चत्युर्‍याई ढङ्गबाट तत्काल हरेक नेपालीलाई यो कोरोनाबाट कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने कोणबाट गंभिर देखिन्दैन । यो समस्या कुनै ब्यक्ति, राजनितीक पार्टीले हल गर्न असम्भव छ तर पनि सरकार मुखदर्शक छ । सरकार स्वयम राजनीतिक संकट उत्पन्न गरि नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद र विग्रहको कारण देश अस्थिरता र अराजकताको चक्रमा फसेको छ । जनताले अभिभावक गुमाएर टुहुरा जस्तै महशुस गरिरहेको छन् । अस्पतालमा बेडको अभाव छ अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको छ । यस्तो अवस्थामा सामाजिक मन भएका सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट सक्ने सहयोग गर्नु मानविय कर्तब्य भित्र पर्दछ । राप्रपा को केन्द्रिय कार्यलयमा बसेको केन्द्रिय समितिको बैठकले पार्टीमा कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने निणर्य गरेको छ । त्यस बमोजिम साना तिना सहयोगका काम विभिन्न नेता तथा कार्यकर्ताबाट भइरहेको छ । जस्तै निषेधाज्ञाबाट प्रभाव, अभाव भएका मजदुरहरुलार्य खाद्यान्न वितरण, हस्पिटलसम्म पुर्‍याउने, अक्सिजन खोज्ने काम भइरहेको छ ।
३. कोरोणा नियन्त्रणका लागि तपाईको रामेछाप जिल्लामा के के काम चालिरहनु भएको छ ?
मेरो लिल्लामा कोही पनि कोरोनाबाट पिडित हुन नपरोस भनी प्रार्थना गर्दछु । हाल गाउँस्तरमा कोरोना पोजेटिभ देखापरेको छ । सरकारलको निणर्य अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यलय स्थानीय सकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । तर यतिले पर्‍याप्त छैन । ब्यावस्थित अस्पतालको अभाव छ । अक्सिजनको समस्या त विकराल छ । विशेष गरि रामेछापको उत्तरी भेगमा त झनै सडक समस्या, एम्बुलेन्सको अभाव धेरै छ । यसलाई मध्यनजर गरि राप्रपा जिल्ला कार्य समितीमा छलफलबाट राप्रपा केन्द्रिय कार्यलय समक्ष अक्सिजन प्लान संचालन गर्न, जिल्ला अस्पतालमा आइ.सी.यु बेड र स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध गराउन सहजीकरणको लागि आग्रह गरिएको छ । यसै गरि उमाकुण्ड ७ भुजीमा एउटा एम्बुलेन्स कोभिड १९ अवधिभरी रहने गरि तयारी भइरहेको छ ।
४. तपाई जनसेवा गर्न खुब रुचाउने ब्याक्ति अहिलेको परिस्थितिमा तपाई जस्तो ब्याक्तिको रुचि हो या बाध्यता छ ?
अबस्य पनि हामी जस्तो प्रत्येक ब्यक्तिको आवश्यक यो समाजलाई, राष्ट्रलाई छ । जन सेवामा समर्पित रहने ब्यक्तिहरु मध्य म पनि एक हुँ । मेरो अभिरुची, दुख, पिडा, समस्या, अन्यय, दमन, शोषण, अत्यचारमा परेको मानिस प्रति सेवा गर्नुनै छ । भविष्यमा पनि रहने छु । बास्तवमा, राजनिती र समाजसेवा अभिन्न अंग हो । जनसेवाको जग राजनितिक हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । त्यसैले राजनीतिक क्षेत्रमा पनि सक्रिय छु । राजनीतिक पार्टी जुन सुकै किन नहोस लक्ष्य उदेश्य एउटै हुन्छ । देश समाज वर्ग, समुदाय, जाति, धर्म, सस्कृति, विकास, प्रसाशन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदिको सम्बोधन राजनीतिक तवरबाटनै हुन्छ । तर पनि सरकारले गैर जिम्मेवारीको कारण ब्यतिगत तर्फबाट विभिन्न सेवामा लाग्नु परेको अवश्था छ । त्यसैले अन्तरको सामाजिक वा ब्याक्तिगत समस्या समाधानमा निरन्तर लागि रहेको छु ।
५. जिल्लाको विकासमा तपाई जस्ता युवा नेताहरुको कस्तो भुमिका रहने छ ?
रामेछाप जिल्ला राजधानीको नजिकको जिल्ला हो । तर विकासको अनुपातमा पिछडिएको छ । पछिल्लो समय खास गरि संघिय शासन प्रणाली पस्चात केही मात्रमा धुले सडक विस्तार भएको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि बामे सरेको देखिन्छ । जति बजेट केन्द्रबाट विनियोजन भएको छ त्यस अनुरुप रामेछाप जिल्लाको भुगोल भित्र केही रुपमा देखिए पनि सारहीन छ । जनताले अनुभुति गर्न योग्य विकास भएको छैन । त्यसैले हामी जस्ता युवाले के बुभ्mन जरुरी छ भने, समृद्ध जिवन सबैको चाहना हो यसका लागि आर्थिक बृद्धि वा विकास आवश्यक त्यसको प्राप्ति कुन तरिकाबाट गर्ने हो । पहिला निक्र्योल गर्नु पर्छ । के गुमाएर के पाउँछौँ लेखाजोखा गर्नु पर्छ । यसलाई हृद्रयगमन गरि हामी रामेछापको हर क्षत्रमा विकास गर्ने योजना छ । बोल्ने भन्दा काम गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता भएकोले म धेरै बोल्दिन काम गरेर देखाउने छु । जुन बेला उपयुक्त समय मेरो लागि हुनेछ । पहिलो प्राथमिकता कृषि उत्पादन हुने छ । दोस्रो सडक विस्तार स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्ष तथा हर प्रकारले सन्तुलित विकासमा जोड दिने छु ।
यस्तो योजना सफल पार्न हामी रामेछापका जनताको वीचमा विद्यमान समस्या चिरफार गर्छौ । स्वार्थमा लागेका त्यस्ता ब्यक्तिको भण्डाफोर गर्छौ । यस प्रकारको योजनाको बारेमा स्थानीय स्तरमा बृहत छलफल राख्छौँ । यद्यपी हाल जो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । उहाँहरुको क्रियाकलापबाट जनता आजित भइसकेको छन् । मलाई लाग्छ, अब जनताले नयाँ अनुहारलाई भतदान गरी निर्वाचित गर्नेछन् । र नयाँ युवाहरु विशेष गरि म जस्ता युवाहरुबाट मात्रै रामेछापको विकासको मुहार फिरिने छ भन्ने विश्वास जनतामा पैदा भएको छ ।
६.तपाईको पार्टीको एकता अहिले कहाँ पुगेको छ ? अनि पार्टी कत्रो हुदै छ ?
विगतमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र राट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भिन्न पार्टीका रुपमा थियो । खास गरि ०६२/०६३ को जन आन्दोलन पस्चात भएका १२ बुदे शान्ति सम्झौताले तय गरेको गणतन्त्र नेपाललाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्वीकार गर्‍यो भने रापपा नेपाल फरक विचार धारा बोकेको पार्टी भएकोले गणतन्त्र स्वीकार गर्ने कुरै भएन । राप्रपा नेपालले बोकेको एजेन्डालाईनै उपयुक्त ठानी पशुपति शमशेर जवरा नेतृत्वको पार्टी ०७४ सालमा हुन गइरहेको निर्वाचनको पुर्व सन्ध्यामा पार्टी एकता भयो । चुनाव चिन्ह गाईलाईनै सहमति गरि चुनावमा सहभागिता भयो । उक्त चुनावमा देशको विभिन्न स्थानमा राप्रपाका थुप्रै स्थानीय प्रतिनिधि निर्वाचित छन् । फेरी संघिय चुनावको पुर्व सन्ध्यामा एकिकरण पार्टी विच विभाजन भयो । डा. प्रकाश चन्द्र लोहोनीको नेतृत्वमा, पशुपति शमशेरको र कमल थापाको नेतृत्वमा गरि ३ वटा पार्टी भयो । तर गणतन्त्रका मतियार भनौदाहरु जनताको दुई तिहाइ मत दिइ बनेको स्थिर सरकार कुर्सिका लागि आन्तरिक विवाद कलह र विग्रहको कारण देश अस्थिरता र अराजकताको भुमरिमा फसेको कारण र अब देशमा जनताले बैकल्पिक शक्ति महशुस गरेको हुनाले २८ फाल्गुन २०७६ सालमा तिन वटै प्रजातान्त्रिक पार्टीविच एकिकरण भई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नाम रहेको छ । हालका पार्टी अध्यक्षहरु पुर्व उपप्रधानमन्त्रि कमल थापा, पशुपति शमसेर राणा, डा. प्रकासचन्द्र लोहोनी हुनुहुन्छ । पार्टीको झण्डामा गाई र हलो चिन्ह भएको छ भने चुनाव चिन्ह हलो कायम रहेको छ । पार्टी अहिले विशाल भएको छ । हाल यो पार्टीको तर्फबाट बागमति प्रदेश सभा सदस्यमा माननिय रिता माझी र माननिय रिना गुरुड.रहनु भएको छ भने संघिय प्रतिनिधि सभा सदस्यमा झापा जिल्ला क्षेत्र नं ३ बाट पत्यक्ष निर्वाचित सांसद राजेन्द्र लिङ्देन हुनु हुन्छ । अब मलाई विश्वास छ अबको निर्वाचनमा यो पार्टीनै अग्रस्थानमा हुने छ कारण, हाल को सरकारले जनतालाई भ्रष्टचार, बेरोजगार भन्दा अरु केहि दिन सकेन त्यतिमात्र होइन प्रतिब्याक्ति राष्ट्रको ऋण ५२ हजार उपहार दिएको छ । पहिले भन्दा अहिले तिन बर्ष भित्रमा दोब्बर १५ खर्ब ८९ अर्ब ऋण राष्ट्रलाई ऋण भार भएको छ ।
७. अहिलेको राजनितिक स्थिरतामा को दोशी प्रणाली या ब्याक्ति, तपाई जस्ता युवा अगुवाहरुको विचार के छ ?
अहिलेको राजनीति प्रणाली इतिहास मै असफल सावित भएको छ । भद्रगोल छ जनता वाक्क दिक्क भई सके । यो वारेमा कुरागर्नु पनि लाज लाग्दो हुन्छ । तपाइले सोध्नु भएको प्रश्न को नै औचित्य देख्दिन किनभने प्रश्न गर्न लायक र जवाफ दिने ठाउँनै छैन । बास्तवमा नोपल देशलाई विकासमा उच्च विन्दुमा पुर्‍याउने यस्तो अवसर कुनै पनि राजनितिक पार्टीलाई थिएन । अस्थिरताको वीचमा सरकार चलाउनु पर्ने स्थिती थियो । जनताको वीचमा सरकार चलाउनु पर्ने स्थिती थियो । जनताले दुइ तिहाई मत दिएर निर्माण भएको सरकार, आन्तरिक विवाद द्धन्दका कारण अस्थिरतामा परिणत गराए । आफैले बनाएको संसिधानलाई कुल्चेर देश संकटग्रस्त अवस्थामा छ । यिनीहरुको ब्यक्तिगत स्वार्थका कारण आज जनता मारमा परेको छन् । छिमेकी मुलुकले यो परिस्थितीमा हस्तक्षेपको कुनै सिमा छैन । यस्तो खालको परिस्थितीमा सरकारले जिम्मेवारी लिनु पर्छ । यसको लेखा जनताले आउँदो निर्वाचनमा लिनेछन् यसमा म ढुक्क छु ।
८. प्रणालि ठिक नभएपनि सरकारलेत चुनाव घोषणा गरिसक्यो अनि तपाईको पार्टीको आगामी चुनावको तयारी कस्तो छ ?
संविधानले निर्धारण गरेको अवधी चुनावमा हाम्रो निश्चित रुपमा जनताको विचमा छाति पुल्याएर जाने तयार छौ । किनभने अवको चुनावमा जनताले हामीलायई माया गर्ने छन् । मलाई विश्वास छ म धेरै चर्चा गर्न चाहन्न अहिलेको परिस्थितिलाई राम्ररी बुझि सकेका छन् । यो ब्यवस्था र प्रणाली प्रति जनताले मत गर्ने छैनन् । हाम्रो पार्टीले लिएको एजेन्डानै देशको हितमा जनताको हितमा छ । हिजोको जस्तो समुहको संगठनको समय गयो । आज हरेक ब्यक्तिको विचारको संगठन छ । अब सचेत नेपालीले सहि विचार सहि मत प्रयोग गर्दछन भन्ने विश्वास छ ।
९. तपाईको पार्टीको एजेण्डामा तपाई ब्याक्तिगतरुपमा कतिको सहमत हुनुहुन्छ ?
म पुणर्रुपमा सहमत छु । सहमत भएरनै यो पार्टीमा छु । मलाई लाग्छ धेरै नेपालीहरु यो एजेण्डा प्रति सहमत छन् । बास्तवमा जरा विनाको रुख हुदैन इतिहास विनाको नेपाल कल्पना समेत गर्न सकिन्दैन हिजोका पुर्खाहरुको विरासतलाई पनि जोगाउनु हाम्रो कर्तब्य हो । मेरै गोरुको बाह्रै टक्का पनि भन्नु मिल्दैन समय परिवर्तित छ । समय सापेक्षे अनुसार समाजको माघ र मानविय चाहनालाई आत्मासात गर्नु पर्छ । त्यसैले सबै नेपाली अटाउने, राजनीतिक संरचना र शासकिय स्वारुप निर्माणको पक्षमा राप्रपा पार्टी उभिएको छ । सबै नेपालीको अभिभावकको रुपमा राजसस्था, पुणर् अधिकार सहित स्थानीय समयन्त्र शासन प्रणाली, शाासकिय स्वारुप अन्तर्गत पत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रिको रुपमा तयार गर्ने । समृद्ध नेपालका लागि विकास, विकासका लागि आर्थिक श्रोतहरु पहिचाहन गर्ने । विश्वमा झण्डै दुई अर्व मानिसहरुको आस्था हिन्दु भएको कारण आस्थाको केन्द्रको रुपमा सबै धर्मलाई समान गरेर धार्मिक स्वातन्त्रता सहितको हिन्दु राष्ट्र पहिचानको रुपमा राप्रपाको मुल एजेन्डा रहेको छ ।
१० अन्तमा केहि भन्न चाहनु हुन्छ ?
भन्ने कुराहरु लगभग माथीनै भनियो, मेरो आग्रह यहि छकी यो बेला म बाँचे तपाइलार्ई बचाउँला तपाई बाँचे मलाई बाँचउनु होला भन्ने अवस्था छ । देशमा अविभावक नभएको महसुस भएको छ । हाम्रो देशका लागि अभिभावक आवश्याक छ जो राजा आउनु पर्ने छ । जहाँ छौ त्यहि सुरक्षित बसौँ, बाँचिय कमाएला रमाइएला जीवनै नरहे के गर्नु । यो विषम परिस्थितिमा तपाई लगाएत तपाईको मिडिया मार्फत मेरा विचारहरु राख्न दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा २२९५ सङ्क्रमित थपिए, १६ को मृत्यु